Leicester oo laga cirib tiray Champion-ka , Atletico oo noqotay kooxdii 2-aad ee Spain ah oo gaarta Semi Final-ka. | Mustaqbal Radio
Home - Barnaamijyo - Ciyaaraha - Leicester oo laga cirib tiray Champion-ka , Atletico oo noqotay kooxdii 2-aad ee Spain ah oo gaarta Semi Final-ka.
Leicester oo laga cirib tiray Champion-ka , Atletico oo noqotay kooxdii 2-aad ee Spain ah oo gaarta Semi Final-ka.
April 19, 2017	22 Views
Hankii kooxda Leicester City ee ku aadanaa tar-tanka xiisaha badan ee Uefa Champions League ayaa xalay lasoo gaba gabeeyay waxaana ay kulankii lugta labaad ee wareega Sideed dhamaadka bar-baro 1:1 ah la dhaafi waayeen Atletico Madrid.
Kooxda Spain ka socotay ayaa ciyaarta natiijo ahaan kaga sareysay dhigeeda Leicester maadaama ay kulankii lugta koowaad guul 1:0 ah ku gaareen garoonkooda.
Xidigaha Kooxda Leicester City ayaa sameeyay fursado dhowr ah oo ay gool ku doonayeen balse natiijadu waxa ay isbedeshay daqiiqadii 26-aad markaa oo ay kooxda Atletico heshay gool uu dhaliyay xidigooda Saul Niguez.
Kooxda Leicester ayaa xilligaa ubaahatay dhalinta Saddex gool si ay ugu soo baxaan wareega xiga ee tar-tanka , balse waa ay ku guul dareysteen.
Dhaliyaha Xulka Saddexda Libaax iyo kooxda Leicester City Jamie Vardy ayaa gool usoo celiyay kooxdiisa kaasi oo natiijada kulanka ka dhigay garbo siman balse kagama filnaan inay usoo gudbaan wareega xiga.